Liverpool Oo Guul Ay U Rafaaday Ka Heshay Tottenham, Alderweireld Oo Gool Uu Iska Dhaliyay Dhibcaha Ugu Hibeeyay Reds Xilli Kooxda Klopp Ay Markale Qabatay Hoggaanka Horyaalka. - Gool24.Net
Liverpool Oo Guul Ay U Rafaaday Ka Heshay Tottenham, Alderweireld Oo Gool Uu Iska Dhaliyay Dhibcaha Ugu Hibeeyay Reds Xilli Kooxda Klopp Ay Markale Qabatay Hoggaanka Horyaalka.
March 31, 2019 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah Anfield kaga gaadhay dhigeeda Tottenham kulan xamaasad badnaa oo la kala baxay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta.
Liverpool oo 2-1 ku guuleysatay ayaa hoggaanka qaybta hore ku haysay gool ay ka heshay Firmino balse Tottenham ayaa lasoo laabatay dar dar waxaana goolka usoo celiyay Moura intaa kaddib dadaalo xoogan oo ay labada dhinac sameeyeen ayuu ugu dambayn gool iska dhaliyay daafaca Tottenham ee Alderweireld kaas oo saddexda dhibcood u sahlay Reds.
Shaxaha Kulankan Ee Labada Kooxood
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Milner, Mane, Salah, Firmino.
Keydka: Mignolet, Fabinho, Lovren, Keita, Lallana, Shaqiri, Origi
Labada kooxood ayaan bilawgii kulanka kala ceshan kubadda koox kastaana waxa ay markeeda qabsanaysay ciyaarta, Mohamed Salah ayaa bilaabay darbooyinka kulanka balse kubad uu ka laagay meel durugsan ayaa dul martay goolka.
Intaa kaddi Tottenham ayaa fursado ay abuurtay ay darbeeyeen Moura iyo Sissoko balse xiddigahaas ayaa ku fashilmay inay ugu yaraan beegsadaan goolka Reds.
GOOAL: Goolka furitaanka ee ciyaarta ayaa yimid daqiiqadii 16-aad ee ciyaarta, Andrew Robertson ayaa kubad cajiib ah oo joog sarre ah goolka hordhigay waxaana madax qurxoon shabaqa Spurs dhex dhigay Firmino oo meel furan ka helay daafaca Tottenham.
Daqiiqadii 34-aad ee kulankan ayuu Dele Alli ku dhawaaday inuu darbad gantaal ah dhex dhigo goolka Alisson, Da’yarka ree England ayaa baas qurxoon lasoo ciyaaray Eriksen waxaana uu intaa kaddib kubadda ku darbeeyay dhinaca goolka balse kubadda ayaa dul martay birta.
ALA MAXAY GOOLKA KU DHAWAATAY – Sadio Mane oo dhawaanahanba wacdarro dhigayay ayaa qarka u fuulay inuu goolka labaad u keeno Reds, Mane ayaa mid kamid ah xiddigaha Spurs xirfad ku diray isla markaana meel xerada ganaaxa ka baxsan ka laagay kubada balse darbada ayaa wax yar u martay goolka.
Qaybta hore ee kulanka ayaa kusoo dhammaatay 1-0 ay hoggaanka ku haysatay Liverpool waxaana goolka lagu kala nastay lahaa Firmino.
Tottenham ayaa rigoore dalbatay bilawga qaybtii dambe kaddib markii uu dhulka quusay Moura oo ay ku hareeraysnaayeen daafacyada Liverpool balse garsooraha ayaan waxba tilmaamin.
Spurs ayaa helay fursadii ugu halista badnayd qaybtii dambe kaddib markii Harry Kane uu kubadda si furan goolka ugu hore helay, Kabtanka England ayaa darbad xoogan ku darbeeyay Alisson kaas oo kubadda badbaadiyay balse Eriksen oo isku dayay inuu kubadda goolka kusoo celiyo markale ayuu Robertson isku dhigay.
Tottenham ayaa intaa wixii ka dambeeyay bilawday inay noqoto kooxda fursadaha badan ee laga filan karayay goolka xiga ee kulanka halka xiddigaha Klopp ay u muuqdeen kuwo goolka ku kaaftoomay.
GOOAL: Dadaalka Tottenham ayaa midhahiisa la helay daqiiqadii 70-aad, Harry Kane ayaa baas dheer y furay Trippier kaas oo isna kubadda usoo dhiibay Eriksen oo goolka hortaagan Eriksen ayaana kubadda isku sii dhaafiyay Moura oo boos wacan taagnaa si sahlana kubad xoogan ku dhex dhigay goolka oo uu si furan u horjoogay.
Origi oo kulanka bedel ku yimid ayaa ku dhawaaday inuu bandhiga kulanka xado goolka labaadna u dhaliyo kooxdiisa Liverpool kaddib laad xor ah oo uu laagay oo kusii dhacay xiddigaha Tottenham balse wax aan badnayn u jirsaday goolka.
CAJIIB: Tottenham ayaa daqiiqadii 84-aad heshay fursad loo fishay inay kulanka hoggaankiisa kula wareegtay, Son iyo Sissoko ayaa weeraray goolka Liverpool oo uu kaliya kaga horreeyo Van Dijk, Sissoko ayaa qaaday masuuliyada goolka lagu dhalinayo balse fursad furan ayuu kubadda si xoogan cirka ug diray.
GOOAL: Liverpool ayaa daqiiqadii 91-aad ee kulanka la timid goolka labaad, Mohamed Salah ayaa kubad joog sarre ah madaxeeyay waxaana xakamayn kari waayay goolhaye Lloris kaas oo iska soo difaacay balse daafaca Tottenham ee Alderweireld ayay kubaddu ku dhacday sidaas ayayna ku gashay goolka.
Ugu dambayn, Liverpool ayaa guul muhiim u ah xilli ciyaareedkeeda ka gaadhay Tottenham, Walow kulanku u muuqday mid dhibcaha la kala qaadan doono haddana kooxda Klopp ayaa ugu dambayn heshay nasiib wanaaga ciyaarta.